गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली गठन ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठUncategorizedगृहमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली गठन !
गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली गठन !
काठमाडौं । सरकारले थरुहट आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई र नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी सदस्य रहेका छन् ।
रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका विषयमा समेत वार्ता हुने बताइएको छ ।सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सोमवार सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गरी वार्ता टोली गठनको जानकारी दिएका हुन् ।त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले देशभरका शिक्षणसंस्था चारदिन ब’न्द गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बसेको आकस्मिक बैठकले सम्पुर्ण शिक्षण संस्था ब’न्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले वायुमण्डलमा देखिएको मौसम प्र’तिकुलताको कारण शिक्षण संस्था ब’न्द गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो ।बैठकमा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलिया, विज्ञान सचिव डा. सञ्जय शर्मा, मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्मा, सहसचिव डा.हरी लम्साल, शिक्षा, तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठ अर्याल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठक अघि मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग परामर्श गर्नुभएको थियो । लगत्तै मन्त्रालयमा भएको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लाखौ विद्यार्थीमा हुनसक्ने स्वाथ्य प्रतिकुलताको कारण सबै शिक्षणसंस्थता ब’न्द गर्नुपरेको बताउनुभयो । बैठकले आज मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म सबै शिक्षण संस्था ब’न्द गर्ने गर्ने निर्णय गरेको हो ।
Breaking: शैक्षिक संस्था कम्तिमा तीन साता ब’न्द गर्न प्रस्ताव गर्ने सीसीएमसीको निर्णय
प्रचण्डले खोले गोप्य कुरा !